Maxaa looga hadlay kulankii Muuse Biixi iyo Geelle? - Caasimada Online
Home Somaliland Maxaa looga hadlay kulankii Muuse Biixi iyo Geelle?
Maxaa looga hadlay kulankii Muuse Biixi iyo Geelle?
Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo saaka gaaray dalka Jabuuti ayaa galinkii dambe ee maanta kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, oo markii hore u fidiyay martiqaadka booqashadiisa.
Kulanka ayaa looga hadlay danaha labada dhinac, adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Jabuuti iyo isku socodka arrimaha bulshada, sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay madaxtooyada Somaliland.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale ka wada-hadlay arrimaha amaanka iyo la socodka arrimaha nabdgelyada mandaqada, maadama ay Somaliland dalka Jabuuti la wadaagto xuduud dhuleed balaadhan.
“Labada madaxweyne ayaa yeeshay kulan muhiima oo ay kaga wada hadleen danaha labada dal, adkaynta xidhiidhka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dhinac iyo isu-socodka arrimaha bulshada. Waxa kale oo kulankaasi lagu soo qaatay sidii horeba ay labada dhinac isaga kaashan jireen ka war haynta iyo la socodka arrimaha nabadgelyada mandaqada,” ayaa lagu yiri qoraalka Madaxtooyada.
Madaxweynaha Somaliland ayaa inta uu joogo wadanka Jabuuti waxa uu kulamo gooni-gooni ah la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi, isaga oo kala hadli doono arrimaha siyaasadda & qodobo kale oo muhiim ah.
Socdaalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa, iyada oo dhowaan madaxweynaha Somaliland uu booqasho ku tegay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaas oo uu wada-hadallo kula soo yeeshay madaxda sare ee wadankaasi oo ay wada gaareen heshiis.